Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 2
Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhagayso Dhuuxa Waraysiyada.
Duqeymo ku socda Jiidda Qazza ee dhulka Filastiin.(Dhagayso)
Halkaan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo
Askar Maraykan ah oo lagu dilay dagaallo ka dhacay wadanka Afqaanistaan.
Dhageyso:Sheekh Qardhaawi oo laga wareystay ilaallo loo sameeyay Masaajida Maraykanka.
War Saxaafadeed Muhiim ah oo kasoo baxay mu’assasada Al-Kataa’ib.
Mu’assasada Al-kataa’ib ayaa baahisay war saxaafadeed sawirra wata oo ku saabsan, xafladdii dhawaan loo qabtay dufcadda koowaad ee Ardeyda ka qalin jebisay machadka tacliinta sare ee Ash-shareeca. War saxaafadeedka oo ku qoran luuqadda carabiga, ayaa lagu sheegay in xafladda ay ka qeybgaleen hogaamiyaal sar sare oo katirsan Xarakada Mujahidiinta Al-Shabaab,iyo mas’uuliyiinta maktabka dacwada, kuwaas oo ardeyda gudoonsiiyay shahaadooyinkooda waxbarashada. War ...	Read More »
Soomaalida degan Ingiriiska oo caroortooda dib ugu soo celinaya Soomaaliya.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska ayaa billowday iney kasoo guurto wadankaas, kuna soo laabato Soomaaliya, kadib dhibaatooyin xoogan oo soo food saaray. Warbaahinta Ingiriiska iyo kuwa ka hadla arimaha Africa ayaa shaaca ka qaaday in Soomaalida degan Ingiriiska ay billaabeen in caruurtooda kusoo celiyaan wadanka Soomaaliya, kadib markii ay soo bateen weerarada lagu beegsanayo caruurtooda. Magaalada London oo ...	Read More »
3 Qof oo lagu dilay Weerar ka dhacay Holand.
March 18, 2019	Leave a comment
Qof hubeysan ayaa weerar ku qaaday muwaadiniin u dhashey wadanka Holand oo kamid ah wadamada reer galbeedka, waxaana weerarkaas ka dhashey khasaare dhimasho ah. Weerarka waxaa uu ka dhacay magaalo lagu magacaabo Utrecht oo kamid ah wadanka Holand, waxaana qofka weerarka fuliyay uu si gaar ah u beegsaday tareennada waaweyn ee ay dadka raacaan. War kasoo baxay Police-ka waxaa lagu ...	Read More »
Ardeyda Beesha Ciroole Oo Sameeyay Bandhig Cilmeed Qurux Badan. (Sawirro)
Machadka Cumeyr Guurow waa machad sharci ah oo ay leedahay beesha Ciroole oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed, waxaana wax ku barta kudhawaad 100 caruur ah oo u dhashey beesha. Dhawaan Ardeydaas waxaa usoo dhamaaday marxaladii sadexaad, waxaana u haray hal marxalad, iyadoona loo qabtay xaflad sagootin ah oo ay hal bil kusoo nasanayaan. Ardeyda ayaa waxaa ka muuqday farxad aad ...	Read More »
Tobaneeyo Askari oo lagu dilay Weerar ka dhacay Maali.
Rag aad u hubeysan oo loo badinayo iney ka tirsan yihiin Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan xukuumadda Maali. Weerarka waxaa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Dioura oo hoostaga gobolka Mopti ee bartamaha wadankaas, waxaana ciidamada weerarka soo qaaday ay cagta mariyeen saldhiga. Wararka horudhac ah ee la helayo waxay ...	Read More »
Kenya oo sheegtay iney kordheen dadkii kaga dhintay diyaaraddii Itoobiya.
Diyaaradii tobankii bishan Marso ku burburtay hawada wadanka Itoobiya ayaa waxaa dadka ku dhintay kamid ahaa 32 Kenyaan ah, kuwaas oo diyaaradda ka raacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Adis Ababa. War cusub oo kasoo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay iney korortay tirada muwaadiniinteeda ee ku dhintay burburka diyaaradda, kadib markii la ogaaday in dhowr qof oo Kenyaan ah ay ...	Read More »
Xildhibaan Ku Jeesjeesay Muslimiintii Lagu Laayay Dalka New Zealand.
Dad badan oo reer galbeed ah ayaa si diiran usoo dhaweeyay weerarkii dhawaan lagu gumaaday dad muslimiin ah oo masjid ku cibaadeysanayay. Dadkaas waxaa ugu caansan xildhibaan ka tirsan Baarlamanka dalka Australia kaasoo si jees jees ah uga hadlay dhacdadii New Zealand oo dadka lagu dilay ay tiradoodu gaareyso 50 halka dhaawacoodu uu dhowr iyo afartan yahay. Xildhibaankan oo lagu ...	Read More »
Dhagayso: Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka hadashay Muslimiintii lagu xasuuqey New Zealand.
March 16, 2019	Leave a comment
Sheekh Cali Maxamuud Raage, Sheekh Cali dheere Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo kalimad jeediyay ayaa ka tacsiyeeyay weerarkii wuxuushnimada ee maalintii Jimcaha ka dhacay wadanka New Zealand, kaas oo lagu dilay tobanaan ruux oo Muslimiin ah. Sheekh Cali ayaa ugu horeyn wuxuu tacsi u diray guud ahaan dadkii Muslimiinta ahaa ee lagu gumaaday weeraradii lagu qaaday labada Masjid ee ku ...	Read More »
Kumuu ahaa Ninkii Gumaadka u geystay Muslimiinta New Zealand?!(Dhagayso Warbixin)
Jimcihii aynu soo dhaafnay , waa mid kamid ah maalmaha naxdinta badan ee soo maray guud ahaan Muslimiinta gaar ahaan kuwooda ku nool wadamada reer galbeedka, iyadoo koox hubeysan ay weerar ku qaaday labo masjid oo ku yaala wadana New Zealand. Wuxuu intaas kadib usii gudbaya qeybta dumarka ee masjidka, isagoo halkaas ku dilaya tiro kale oo muslimiin ah, ugu ...	Read More »
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 08-07-1440
March 15, 2019	Leave a comment
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 15-03-2019 Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 15-03-2019 tayo dhexe	Read More »
Page 2 of 136«12345	»	102030...Last »
DHAQASHO WAA GEEL
Nagala soco Facebook
© 2016 Radioalfurqaan.com. Xuquuqda Boggani waa Xafidan tahay.